किन पुरुषहरुले विवाहित महिला सँग सम्भोग गर्न मनपराउँछन् ? हेर्नुहोस कारणहरु - Online Tamang
किन पुरुषहरुले विवाहित महिला सँग सम्भोग गर्न मनपराउँछन् ? हेर्नुहोस कारणहरु
काठमाडौं । हाम्रो समाज मात्रै होइन, विश्वका विभिन्न समाजमा पुरुषले युवती भन्दा विवाहित परस्त्रीसँग सम्भोग गर्न मनपराउँछन् । यो मनोवैज्ञानिक स्वाभाव पनि हो ।तर, परस्त्रीले पुरुषलाई कसरी आकर्षित गर्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ । कुनै कुनै परस्त्री यस्ता हुन्छन् ।
जसलाई देख्नेवित्तिकै पुरुषको उत्तेजना १८० डिग्रीसम्म पुग्छ । परस्त्रीसँग आकर्षित हुने कारणहरु यसप्रकार छन् : जहिले पनि यौवनपूर्ण अवस्थालाई महिलाको आकर्षणसँग जोडिन्छ ।
पुष्ट अधर, कोमल छाला, स्वस्थ आँखा, चमक भएको केश तथा कसिलो शरीर भएका महिलालाई आकर्षक मानिन्छ । त्यसैगरी विकसित स्तन पनि महिलाको शारीरिक आकर्षणको मापदण्डमा पर्छ ।
विकसित स्तनले भावी सन्तानको पोषणको सुनिश्चिततालाई संकेत गर्छ । प्रायः सबै समाजमा महिलाको आकर्षणमा कम्मर–नितम्ब अनुपातको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
स्तन महिलाको अङ्ग भए पनि पुरुषले पनि यौन आनन्द प्राप्त गर्ने भएकाले नै होला, उनीहरू यसप्रति आकषिर्त हुन्छन् । स्तनलाई महिलाको सुन्दरतासँग जोडिन्छ ।
प्रायः पुरुषले आफूभन्दा केही होचा महिलालाई रुचाएको पाइन्छ।केही अपवादलाई छोडेर प्रायः व्यक्तिले आफ्नो अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो अनुहारमा विशेष आकर्षक पाउन सक्छ ।
दायाँबायाँ मिलेको हुनुका साथै अनुहारको माथिल्लो भाग (निधार भएको भाग), मध्यभाग (आँखा, नाक, गाला) अनि तल्लो भाग (ओठ, चिउँडो) समान अनुपातको हुनुलाई सुन्दर अनुहार मानिन्छ । सम्भवत : तपाईं आकषिर्त हुनुभएको महिलामा पनि यी कुरा पक्कै होलान् ।
विवाहित महिलाप्रति किन आकर्षित हुन्छन् पुरुष ? कतिपय अविवाहित महिला विवाहित पुरुषप्रति आकषिर्त भएजस्तै अविवाहित पुरुषहरू पनि विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त हुन्छन् ।
पक्का भन्न नसकिए पनि यसका केही सम्भावित कारणमध्ये केहीको चर्चा गरौं ।पुरुष स्वभावले नै यौनसम्पर्क राख्न लालायित हुन्छ । यौनसम्पर्कका लागि यौन साथीसँगको सम्बन्धप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ ।
विवाहित महिलासँगको सम्बन्धमा प्रतिबद्धताको आवश्यकता नपर्ने हुनाले सजिलो हुन्छ ।अर्को तर्क पुरुष स्वभावले नै चुनौतीपूर्ण कार्य गर्न चाहन्छ र विवाहित महिलासँगको सम्बन्धमा एक किसिमको विजयबोध गर्छ ।
विवाहित महिलाहरू यस्ता सम्बन्धका सन्दर्भमा कम तनावमा हुन्छन्, किनभने उनीहरू भावनात्मक रूपमा परिपक्व हुन्छन् र उनीहरूका लागि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन ।
विवाहित महिलाले त्यस्ता पुरुषसँग सामाजिक, आर्थिक भार उठाउन सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका हुँदैनन् र सम्बन्धमा प्रतिबद्धता पनि खोजेका हुँदैनन् ।
उनीहरूको उद्देश्य यौन सम्पर्क राख्नु मात्र हुन्छ । यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउने उपाय : तपाईं अहिले किशोरावस्थामै हुनुहुन्छ । यो उमेरमा यौन भावनाको विकाससँगै विभिन्न किसिमका यौन परिकल्पना पनि गरिन्छ ।
यसै क्रममा विवाहित महिलाप्रति यौन रूपमा आकषिर्त हुन पुगिन्छ । तपाईं विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त भए पनि उमेरको हकमा अझै पनि बढ्ने क्रममै हुनुहुन्छ ।
उपरोक्त कुराका आधारमा तपाईंले आफू यसरी विवाहित महिलाप्रति आकषिर्त भएको कुरालाई विश्लेषण गरेर कारण पत्ता लगाउनुभयो भने समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
माथि गरिएका आकर्षणका कुरा हुँदाहुँदै पनि विवाहित व्यक्तिका लागि यो विवाहेत्तर सम्बन्ध हो । यसबाट श्रीमानलाई धोका दिएको नै मानिन्छ र सबन्ध–विच्छेदसम्म पनि हुन Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular life. You get to forget your problems/issues forafew weeks, it can also help you figure things out that you would not have understood without the distance traveling can give you. We all have crazy schedules, work andafamily to take care of, going away alone or with some friends can give you distance and perhaps even make you realize how important these people are for you. Like the saying says: we never know what we have until we lose it.
Prev-कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतोे ?
Nextपुरस्कारको कारण बुद्ध लामाको परिवार तनावमा, पैसा नभएको चेक दिएर बुद्धलाई यसरी फसाईयो अन्तरवार्ता
प्यास मेटाउने नेपालको राजधानी सुन्दर नगरी काठमाडौं उपत्यकालाई बिश्वभरी चिनाउन दिल खोलेर एक एक लाइक, कमेन्ट र शेयर गरम (8)